Indlu encinci yeNostalgic kwindawo yelifa lehlabathi - I-Airbnb
Indlu encinci yeNostalgic kwindawo yelifa lehlabathi
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguÅse
Indlu encinci yasefama enomtsalane eMoldskreddalen eyinxalenye yeSiza seLifa leMveli le-UNESCO. Ikhabhinethi inika amava akhethekileyo njengoko ingenawo zombini umbane kunye namanzi. Amathuba akhethekileyo okunyuka intaba kanye ngaphandle komnyango, kunye neNorangsdalen kunye nommandla waseGeiranger kwindawo ekufutshane. I-Geirangerfjord yaziwa ngeengxangxasi zayo ezintle kunye neefama ezindala zeentaba ezibambelele kwintaba. Nceda uqhagamshelane nathi ngolwazi oluthe kratya.
Ukubuyela kwisiseko, apha ungaphila iminyaka eyi-100 emva kwexesha kwaye ube namava angenakulibaleka. I-cottage inomgangatho olula, kunye nesitofu segesi, ifriji, ukufudumeza kunye nendlu yangasese yangaphandle. Amanzi okusela alandwa kumlambo okufutshane. Ubungakanani bebhedi ephindwe kabini kwigumbi lokulala yi-120x185. Indawo yokulala eneleli enoomatrasi aba-2 phantsi, ubukhulu be-75x190.
Umbuki zindwendwe ngu- Åse
Izitshixo kufuneka zithathwe e-Stadheim Gård (Bygda 263) apho sihlala khona. Ingqokelela engundoqo kufuneka kuvunyelwane ngayo kwaye eminye imiyalelo iya kunikwa. Akukho fowuni yokugubungela okanye i-intanethi kwi-cottage. Ukuba kukho nantoni na, sifumaneka iiyure ezingama-24 ngosuku ngefowuni. Ulwazi olongezelelweyo lunikiwe kwingqokelela engundoqo.
Izitshixo kufuneka zithathwe e-Stadheim Gård (Bygda 263) apho sihlala khona. Ingqokelela engundoqo kufuneka kuvunyelwane ngayo kwaye eminye imiyalelo iya kunikwa. Akukho fowuni yok…